Mombamomba ny orinasa - Shandong Guiyuan Advanced Ceramics Co., Ltd.
Shandong Guiyuan Advanced Ceramics Co., Ltd. (SICER) dia orinasa teknolojia avo lenta namboarina avy ao amin'ny Shandong Institute of Ceramics Research & Design, natsangana tamin'ny 1958, ary novolavolaina ho lehibe R&D, endrika famolavolana sy famokarana ho an'ny haitao avo lenta seramika, seramika mandroso ampiasaina isan'andro sy akora vita amin'ny seramika, izay misy fiatraikany lehibe amin'ny fampivoarana ireo fitaovana tsy metaly tsy metaly an-trano sy any ivelany.
Ny SICER dia nanjary tanindrazana manan-danja amin'ny zon'ny fananana ara-tsaina, ary ny vokariny dia be mpampiasa amin'ny fanaovana taratasy, metallurgy, petrochemical, herinaratra ary indostria hafa.
Tamin'ny taona 2017, SICER dia nanangana valan-javaboary seramika mandroso, miaraka amin'ny granulator vovoka, presse isostatika be loatra, lafaoro mandeha ho azy, foibe fanodinana CNC ary andiana fitaovam-pitaovana be pitsiny. Ny tsipika famokarana ho an'ny akanjo anaovana dia nohavaozina tanteraka. Miankina amin'ny Shandong Industrial Design Center, ny SICER dia nandray anjara mavitrika tamin'ny tetik'asa fikarohana iraisana sy ny fandalinana lalina ny rafitra fananganana dewatering; amin'ny alàlan'ny fampiharana fikarohana mifototra amin'ny olana, ny SICER dia nifantoka tamin'ny fandinihana ny fananana ny alumina, ny alimina vita amin'ny oksida, ny zirconia, ny karbôna silikona, ny silida nitrida ary ny fitaovana hafa hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Fitaovana fanodinana vovoka
Fitaovana ho an'ny faritra miendrika manokana
Kiln mandeha ho azy
Miaraka amin'ny zava-bita teknolojia mihoatra ny 80% nampiharina, SICER dia nanjary tany manan-danja amin'ny zon'ny fananana ara-tsaina, ary ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny pulp & taratasy, metallurgy, petrochemical, herinaratra herinaratra ary indostria hafa.
Ho an'ny indostrian'ny fanaovana taratasy, ny vokatra vita amin'ny seramika vita amin'ny SICER dia vita soa aman-tsara amin'ny tsipika famokarana milina haingam-pandeha haingam-pandeha, miaraka amin'ny sakan'ny refy mihoatra ny 6,6 metatra ary ny hafainganam-pandeha hatramin'ny 1300 m / min. Miorina amin'ny tsena avo lenta eto an-toerana, nanamafy ny fiaraha-miasa amin'ny VOITH, VALMET, KADANT ary orinasa iraisam-pirenena fanta-daza ny SICER, ary lasa orinasa iray mahomby mitarika ny fampiroboroboana ny fitaovana fanaovana papelisin'i Shina.
Ankoatr'izay, ny conne ceramic novolavolain'i SICER dia natsangana mihoatra ny 30 andiany miaraka amina vokatra 200 mahery. Miaraka amin'ny kalitao tena tsara manohitra ny fiatraikany, ny abrasion ary ny harafesina, dia amidy tsara erak'izao tontolo izao ireo vokatra ireo.
Taorian'ny foto-kevitra fanavaozana indostrialy sy fanatsarana ny fahaizan'ny firenena, SICER dia nanangana valan-javaboary seramika mandroso, miaraka amina granulator vovoka, presse isostatika be loatra, lafaoro mandeha ho azy, foibe fanodinana CNC ary andiana fitaovana faran'izay raitra. Ny tsipika famokarana ho an'ny akanjo anaovana dia nohavaozina tanteraka. Miankina amin'ny Shandong Industrial Design Center, ny SICER dia nandray anjara mavitrika tamin'ny tetik'asa fikarohana iraisana sy ny fandalinana lalina ny rafitra fananganana dewatering; amin'ny alàlan'ny fampiharana fikarohana mifototra amin'ny olana, ny SICER dia nifantoka tamin'ny fandinihana ny fananana ny alumina, ny alimina vita amin'ny oksida, ny zirconia, ny karbôna silikona, ny silida nitrida ary ny fitaovana hafa hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Mba hanafainganana ny fizotry ny toerana misy ny fitaovana avo lenta any Shina, dia hiezaka ny SICER ho orinasa ceramic teknolojia avo lenta manerantany.